Injector nozzle, ဆီ Injector, အဖြစ်များသည့်ရထား Injector - Derun
ဘုံရထား Injector Armature
ဘုံရထားလမ်း injector ဖိအား pin ကို
ဘုံရထား Injector ရှဲလ်
ဘုံရထားလမ်း injector အဆို့ရှင်ပန်းကန်
ဘုံရထား Valve ညီလာခံ
ဘုံရထား Valve လှံတံ
ဘုံရထားလမ်း injctor ခွံမာသီး
ဘုံရထား Injector အဝတ်လျှော်
ဘုံရထားလမ်း solenoid valve
ဘုံရထား Valve ပြား
ဘုံရထား Valve Cap
Injector ဖိအား Pin
Co. , Ltd ဖွံ့ဖြိုးဆဲရှန်ဒေါင်း Liaocheng Derun EMT ။ 1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, 60000 စတုရန်းမီတာဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ 500 ကျော်န်ထမ်းများနှင့် High-end ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာ 400 နီးပါးအစုံရှိပါတယ်, အဲဒီမှာ 8 ကြီးမားသောခေတ်သစ်ဖုန်မှုန့်-အခမဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးလေးကိုင်းအခက်များရှိပါတယ်။ Derun EMT သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ပေါင်းစပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် production, sale and service. It is one of the largest production bases for the production of general gasoline engine parts and diesel vehicle engine parts in China.
Derun EMT အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်ရုံများအတွက် gaskets, စမ်းနဲ့ဖိအားတံသင်, ပစ္စတင်တံသင်, အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာတံသင်နှင့်အခြားရိုးရာထုတ်ကုန်ညှိ, လောင်စာဆီ injector နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်၏အကြီးဆုံးပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2008 ခုနှစ်မှစ. Derun EMT အောင်မြင်စွာထိန်းချုပ်ဆို့ရှင်တီထွင်လိုက်ပါတယ် ......
, အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံလောင်စာထိုးစနစ်များအဲဒီအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလုံးဝမော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်များနှင့်အစားထိုးအလားတူတင်သွင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ယူရို 4,5 ထုတ်လွှတ်စံကျေနပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီ Injector / nozzle , ဘုံရထားပြုပြင်ခြင်း Kit, အဖြစ်များသည့်ရထား Injector ထိန်းချုပ်ရေး Valve , Injector ထိန်းချုပ်ရေး Valve , Common Rail Parts, ဆီ Injector ခန္ဓာကိုယ် ,